Waa maxay sababta rasmiga ah ee ka dambeysa guuldarooyinka kooxda Chelsea? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Waa maxay sababta rasmiga ah ee ka dambeysa guuldarooyinka kooxda Chelsea?
December 6, 2018 at 07:09 Waa maxay sababta rasmiga ah ee ka dambeysa guuldarooyinka kooxda Chelsea?2018-12-06T07:09:30+00:00 CAYAARAHA
kooxda Chelsea ayaa xilli ciyaareedki hore seegtay tartanka Champions league iyaga ka hoos maray afarta boos ee loogu soo baxo tartanka ugu weyn qaarada Yurub ee Uefa Champions League.
Kadib marki is badal macalin lagu sameeye Blues ayaa la rajeynaaye inay dib u hesho hanaankeedii wacnaa ee guulaha balse ilaa haatan xaalado dhibaato ayay maraeysaa kooxdaan.
Dhibaatada ugu weyn ee Chelsea heesato waa Weerarka iyadoo aan ilaa haatan kooxdaan helin dhameestire fiican tan iyo marki uu kooxdooda ka tagay Deigo Costa kasoo ahaa dhamestire Sifiican loogu jeclaa Stanford Bridge.
imaanshiyaha Sarri ee Chelsea waxa ay ka dhigtay kulamadii bilawga koox si wanaagsan ku furatay balse dhibaatooyin is daba jooga ayaa kooxda blues ku habsaday iyadoo ay ugu dambeesay guuldaradii ay ka qaateen kooxda Wolves habeenkii xalay.
Inta badi guuldarooyinka Chelsea waxaa loo sababeenayaa Macalinka reer Talyaani kasoo wax badan lumiyay kalsoonida Kante kasoo uu u adeegsado boos aan horay looga baranin halka uu Jorginho u adeegsado booska wiilka reer France tasoo noqotay dhibaato wax badan lagu dareemo kubad joojinta qadka dhexe.
Todobaadka soo aadan waxa ay la ciyaari doonaan kooxda Man City oo guuldaro la’aan ah iyadoo libinta kulankaas loo badinaayo inay qaadato kooxda reer carbeed ee City.
« Real Madrid oo weyn doonta AFAR ka mid ah xidigaheeda muhiimka ah kulanka caawa ee Copa del Rey
Dowladda Jabuuti Oo Ka Hadashay Wadahadallada Eritrea »